Qaboojinta Ciyaaraha: Waa Maxay, Sida Loo Sameeyo Iyo Faa'iidooyinka | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Fitness
Markaad ku tababaraneyso hal jimicsi, xooga weyn ayaa had iyo jeer la saaraa kan kululaynta isboortiga. Waan ognahay in dhaqankani caawinayo kahortaga dhaawacyada iyo hagaajinta waxqabadka inta lagu jiro kalfadhiga. Waana in kala-goysyada, muruqyada iyo muruqyada la dhaqaajiyo oo noqda kuwo jilicsan oo gacan ka geysta kahortagga dhaawacyada suurtagalka ah sababo laxiriira ama saameyn aan la filayn Si kastaba ha noqotee, kama hadlin wax badan sidoo kale maahan qaboojinta ciyaaraha. Tani waa ficilka lagu sameeyo dhamaadka tababbarka iyada oo ujeedo isku mid ah oo ah kuleylinta laakiin ay u adeegto xasilinta jirka markale.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sifooyinka iyo muhiimadda qaboojinta isboortiga.
1 Dhaqdhaqaaqa jirka iyo waxqabadka
2 Waa maxay qaboojinta isboortiga
3 Wejiyada lagama maarmaanka u ah qaboojinta cayaaraha
Dhaqdhaqaaqa jirka iyo waxqabadka
Markii aan tababbarayno ama qabanayno cashar kasta oo jimicsi ah waxaa muhiim ah inaan u hoggaansano dhammaan wejiyada looga baahan yahay natiijo wanaagsan. Wejiyadaani waa: isboorti isboorti, jimicsi iyo isboorti qabow. Weji kasta wuxuu leeyahay ujeedkiisa ugu weyn. Haddii dhammaan wejiyadahan si sax ah loo fuliyo waxaan gaari doonnaa natiijooyin wanaagsan iyo faa'iido caafimaadkeenna. Intaas waxaa sii dheer, waxay naga caawin doontaa inaan ka hortagno dhaawacyada suurtagalka ah iyo xanuunka murqaha.
Waxaa jira dad isku qalda isboorti isboorti iyo isboorti qabow leh iyadoo la la’yahay xargaha kabaha. Hal shay shaqo kuma laha tan kale. Madax adaygu wuxuu u muuqdaa tababar ka badan koox muruqa ah oo gaar ah. Waxay u muuqataa midkood sababta oo ah muruqa looma tababbarin culeyska la saaray ama sababtoo ah looma adeegsan dadaalkan. Haddii aan tababarno oo aan raadino natiijooyin wanaagsan waa in aynaan raadsan xanuun.
Sidaan horeyba u ognahay, diirimaadka kahor kalfadhiga jimicsiga jirka wuxuu caawiyaa diyaarinta muruqyada iyo jirka wajiga xiga. Marxaladdan waxaan ku tababbaraynaa ama ku jimicsi doonaa ficilka laftiisa. Dhamaadka kal-fadhiga, waa muhiim sidoo kale in la sameeyo isboorti qabow ama qabow sida ay tahay in la diiriyo kahor. Qaboojinta ayaa badanaa hoos loo dhigaa, in kasta oo waxqabadkeeda la ogyahay inay leedahay khusayso gaar ah.
Ku dhowaad nooc kasta oo tababar ah ayaa xiiso leh in la qaboojiyo.
Waa maxay qaboojinta isboortiga
Waxaa badanaa lagu qeexaa geedi socodka la sameeyo ka dib jimicsi jireed oo leh dabeecad dadaal dhexdhexaad ah. Ujeeddadeedu waa in la awoodo in la diro jirka si loogu laabto qiyamka dheef-shiid kiimikaadka nasashada. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa la qabsashada neerfaha, si ay awood ugu yeelato inay gaarto xaaladda bilowga ah ee nasashada. Waa muhiim inaad is dejiso haddii aad jimicsi sameyso si aad si tartiib tartiib ah u yareyn karto xoogga dadaalka. Sidan oo kale, kama dhigi doonno muruqyada inay dhaqso u qaboobaan waxaana laga yaabaa inaan dhaawac qabno.
Waxaad u badan tahay inaad maqashay qof dhahaya 'weyshiisu' way kacday 'fadhiga orodka ka dib. Waxay u badan tahay, qofkaasi inuu dhammeeyay isboortiga oo uu fadhiistay ama jiifsaday isagoo aan sameynin isboorti habboon oo qabow. Haddii muruq ku jira kicinta joogtada ah waxaan uga tagnaa wadar ahaan nasasho haddii qaboojin hore, ka dibna marka ay tahay waqtigii dib loo howlgelin lahaa, waxaa laga yaabaa inaysan fulin isla hawsha oo waxaan ku dambayn doonnaa nafteenna.
Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee qaboojinta isboortiga ayaa ah kuwa soo socda:
Waxay ka caawisaa caadiyeynta howlaha jirka iyo isu-dheellitirka guud ee qaab-dhismeedka jirka. Homeostasis waa gobolka uu jirku si buuxda ugu nasan yahay shaqooyinka dheef-shiid kiimikaadka ayaa si sax ah u shaqeeya. Jidhku wuxuu caadiyan u janjeedhaa homeostasis sidaa darteedna waxaa jira fadhiisinno marka ay timaado hagaajinta jimicsiga.
Soo celi substrates tamarta iyo overcompensate jirka. Magdhawga dheeraadka ah waa mid ka mid ah yoolalka ugu waaweyn ee jimicsiga. Caadi ahaan waa inaan la qabsano tababarka oo aan sii wadno horumarka iyo inbadan. Xaqiiqdii waxaad waligaa maqashay qof dhahayo taa tareenada inay xoogaa ka xoog yaraato maalin kasta.
Hadafka ugu dambeeya ayaa ah soo celinta xubnaha qaabdhismeedka unugyada iyo dhammaan nidaamyada enzyme. Ha iloobin in nidaamkayaga gacanta iyo habka dheef-shiid kiimikaadka uu si joogto ah u shaqeynayo inta lagu jiro howsha tababarka.
Wejiyada lagama maarmaanka u ah qaboojinta cayaaraha
Qaboojinta isboortiga si ay u noqoto mid waxtar leh oo fulisa shaqooyinkeeda ugu muhiimsan, isticmaalka dharka ku habboon waa lagama maarmaan. Tanina waxay u baahan tahay xoogaa dhaqdhaqaaqyo soo kabasho oo gaar ah oo aan ku dhammaysan tababarka. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la sameeyo qaboojinta isboortiga tartanka ka dib. Waa lagama maarmaan in jimicsiyo kala duwan oo is kala bixin ah la isticmaalo oo looga gol leeyahay in lagu murqo muruqyada ku lug lahaa waxqabadka la qabtay.
Muddada isboortigu qaboojinayo waa inuu noqdaa 10 daqiiqo. Khubaradu ma jecla inay waqti xadido kulaylinta iyo qaboojinta labadaba. Tani waa sababta oo ah qof kastaa wuxuu u baahan yahay kuleyl iyo qabow ka duwan. Waxa jira dad xaaladooda jidheed ka liidata oo u baahan doona labadaba waqti dheeri ah oo lagu kululeeyo iyo wakhti dheeraad ah oo dib loogu dhiso jidhka. Dadkani waxay u nugul yahiin dhaawac, markaa xooga badan waa in la saaraa fiditaanadan.
Wajiyadaha qaboojinta isboortiga waxay soo saari karaan faa'iidooyinka soo socda:
Waxay hagaajinaysaa dabacsanaanta guud.
Waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta xoogga siligga iyo dabacsanaanta muruqyada, seedaha iyo fasciae.
Hagaajinta awooddeena muruqyada.
Waxay door bidaa daaweynta iyo baxnaaninta dhaawacyada.
Waxay ka hortagtaa dhaawacyada suurtagalka ah tababarka kadib.
Inta hawshani socoto way ku habboon tahay in la qabto waxqabadyo sida ku-riixitaanka ama ku dabbaqidda farsamooyinka nasashada neefsashada. Duugista ayaa sahleysa soo noqoshada xididka iyo fidinta si looga hortago dhaawacyada loona hagaajiyo dabacsanaanta. Dhammaan waxqabadyadani waxay hagaajinayaan gaadiidka dhiigga waxayna baabi'inayaan aashitada uruursan ee muruqyada.
Qof kastaa wuu ka soo kaban karaa si habboon isagoo u mahadcelinaya qaboojinta isboortiga iyada oo aan culeyska jirkiisa la saarin. Waxaa jira dad badan oo, waqti la'aan darteed ama sababtoo ah aysan caado u lahayn ama ka tagayaan marxaladan soo kabashada. Waa lagama maarmaan in la sameeyo caano in jirkeenu ku nasan doono xaalado wanaagsan tanina waxay u tarjumi doontaa faa'iido wanaagsan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto qaboojinta isboortiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Qaboojinta ciyaaraha
Gargaarka Baaskiil wadista
Isbeddellada kabaha ragga